ITOOBIYA: Kumanaan Maxbuus Oo La Siideynayo Iyo Kumanaan Kale Oo La Maxkamadeynayo | Berberatoday.com
ITOOBIYA: Kumanaan Maxbuus Oo La Siideynayo Iyo Kumanaan Kale Oo La Maxkamadeynayo
Addis ababa(Berberatoday.com)-Ku-xigeenka Af-hayeenka Dawladda Itoobiya Mr Zadig Abraha ayaa sheegay in dawladda Itoobiya sii daysay ku dhawaad toban kun oo maxbuus, isla-markaana Maxamadda la hor geyn doono ilaa laba kun iyo shan boqol oo Maxbuus oo kale, Maxaabiistaa oo dhamaantood xabsiyada dalkaasi loo taxaabay muddadii xukunka degdega ahi saarnaa dalkaasi.
Ku-xigeenka af-hayeenka dawladda Zadig Abraha ayaa warkan u xaqiijiyay Idaacadda BBC-da.
Af-hayeenka oo ka hadlaya Xaaladda Maxaabiista la sii daayey iyo kuwa wali xidhan ayaa waxa uu yidhi “Kuwa la sii daynayo waxa la siiyay tabobbaro gaar ah si loo xaqiijiyo in aanay mar dambe ugu dhaqmin dabeecad burburin ah, sidoo kalena ilaa 2,500 maxbuus oo kale lagu oogi doono dembiyo la xidhiidha deganaansho la’aan”.
Dhinaca kalena, Dawladda Itoobiya waxay raalli galin ka bixisay kharriirado khaldan oo ardayda la baray iyo Dhimashadii ka dhalatay dibad baxyada, waxaanay Itoobiya xannibaadii ka qaaday diblomaasiyiinta.
Dalka Itoobiya ayaa haatan ku jira xaalad deganaansho iyo Nabadgelyo, waxaana istaagay Dibad baxyadii rabshadaha wattay tan iyo markii uu Raysul wasaaraha dalkaasi kusoo rogay xaalada Xukunka degdega ah.